Yintoni iTekhnoloji yeBlockchain? | Martech Zone
Yintoni iTekhnoloji yeBlockchain?
NgoMvulo, nge-11 kaDisemba ngo-2017 Lwesine, Disemba 14, 2017 Douglas Karr
Jonga ityala eliyidola, kwaye uyakufumana inombolo ye-serial. Kwitshekhi, uya kufumana indlela kunye nenombolo yeakhawunti. Ikhadi lakho letyala linenombolo yekhadi letyala. Ezo manani zifakwe kwindawo ethile kwindawo ethile- nokuba kukwiziko ledatha likarhulumente okanye kwinkqubo yebhanki. Njengoko ujonga idola, awunalo nofifi ukuba injani na imbali yayo. Mhlawumbi ibiwe, okanye mhlawumbi ikopi yomgunyathi. Okubi nangakumbi, ulawulo oluphambili lwedatha lunokuxhatshazwa ngokuprinta ngakumbi, ukubabamba, okanye ukuxhaphaza imali- kuhlala kukhokelela ekunciphisweni kwayo yonke imali.
Ungathini ukuba… kwityala ngalinye ledola, itsheki, okanye intengiselwano yekhadi letyala, bekukho amaqhosha afihliweyo anokusetyenziselwa ukufikelela kwiirekhodi zentengiselwano? Inxalenye nganye yemali inokuqinisekiswa ngokuzimeleyo ngothungelwano olukhulu lweekhompyuter- akukho ndawo inedatha yonke. Imbali inokutyhilwa ngoku zemigodi idatha ngalo naliphi na ixesha, kuthungelwano lweseva. Isiqwenga semali ngasinye kunye nentengiselwano nganye sinokuqinisekiswa ukuchonga ukuba ngubani ongumnini, apho ivela khona, ukuba iyinyani, kwaye ikwarekhoda intengiselwano elandelayo ukuba isetyenziswe kwintengiselwano entsha.
I-blockchain sisikhokelo esisemthethweni sazo zonke iintengiselwano kwinethiwekhi yoontanga. Sebenzisa le teknoloji, abathathi-nxaxheba banokuqinisekisa ukuthengiselana ngaphandle kwesidingo segunya lokuqinisekisa eliphambili. Izicelo ezinokubakho zibandakanya ukuhanjiswa kwengxowa, ukuthengisa urhwebo, ukuvota, kunye nokunye okuninzi okusetyenziswayo.
I-blockchain yitekhnoloji esekelayo evumayo cryptocurrency NjengoBitcoin, i-Ethereum, i-Ripple, i-Litecoin, i-Dash, i-NEM, i-Ethereum, i-Monero kunye ne-Zcash. Le infographic evela kwi-PWC ibonelela ngokujongwa okunzulu kwitekhnoloji ye-blockchain, ukuba isebenza njani, kwaye zeziphi amashishini anokuchaphazeleka yiyo.
Ngelixa kukho itoni ye-buzz ejikeleze iBitcoin ngoku, ndingakukhuthaza ukuba ungawahoyi amabali amaninzi kwaye ugxile kubuchwephesha obuphantsi. Uninzi lweengcali ezingafundanga, ezingezizo ezobuchwephesha zifanisa iBitcoin nokukhawulezisa kwegolide, okanye iqamza lesitokhwe, okanye nefashoni nje. Zonke ezi ngcaciso kunye nolindelo zenziwe ngaphezulu. I-Bitcoin ayifani nenye imali eyakhe yenziwa, enkosi kwitekhnoloji ye-blockchain. IBlockchain yitekhnoloji eyintsokothileyo efuna amandla ekhompyuter njengoko singazange sayifuna ngaphambili. Isisiseko zemigodi Intengiselwano inokufuna amashumi amawaka eedola kwizixhobo, iindleko zamashumi eedola, ukusebenzisa isixa esikhulu samandla, kwaye kufuna imizuzu okanye iiyure zomsebenzi.
Oko bekuthethile, khawufane ucinge ngehlabathi apho isatifikethi sakho sedijithali sithembekile kuba sinamaqhosha kwimbali yazo zonke iiklasi oziqinisekisileyo ngoontanga bakho… ngaphandle kokubiza inkampani eqinisekisayo. Ihlabathi apho kungafuneki ukuba ujonge ngokwakho imbali yeshishini kodwa unokuthi, endaweni yoko, uqinisekise umsebenzi awenzileyo njengoko uchaziwe kuwo isivumelwano se-blockchain-sales sales. Intengiso inokugcina imbali yomboniso wayo kunye nentengiselwano kumntu onqakraza ukuqinisekisa ukuba ayisiyiyo inkohliso.
IBlockchain yitekhnoloji ethembisayo enokusetyenziswa naphina. Ndijonge phambili ekuboneni okulandelayo!
Amabali angama-360: Yenza, uhlele kwaye upapashe i-360˚ yakho yemikhankaso yeVidiyo
Ngomhla wama-12 ku-Disemba 2017 ngo-2: 06 PM
Inqaku elihle. Eyona nyani ichazwe kakuhle kwiBlockChain ndiyibonile ukuza kuthi ga ngoku! Enkosi!
Ngomhla wama-13 ku-Disemba 2017 ngo-11: 58 AM
Beka kakuhle. Enkosi ngokubeka ngokucacileyo oku.